Sheekada filimka Jurassic World: Fallen Kingdom: Action iyo qiiro caadi ahayn ayuu filimkan leeyahay | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka Jurassic World: Fallen Kingdom: Action iyo qiiro caadi ahayn ayuu filimkan leeyahay
Qof hilmaami karo ma jiro ruug cadaa Stephan Spielberg markii uu sanadii 1993 aduunyada ku qabsaday filimkii Jurassic Park ee noqday midkii ugu horeeyay $1-bilyan soo xareeyo.
Sanadii 2015 ayaa sidoo kale la sameeyay filimka isagaha Bilyan-ka ku biiray Jurassic World haatana 2018 kooxdan waxay la imaadeen mashruucooda sedexaad magaciisana waa Jurassic World: Fallen Kingdom.
Jilaayaasha filimkan: Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Ted Levine, Rafe Spall, Toby Jones, Justice Smith, Daniella Pineda, James Cromwell, Jeff Goldblum.
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Filimkan: Ugu dambeyntii waxaan helnay Jurassic Park Action iyo qiiro isku dheeli tiran kadib mashruucaan asalkiisii kowaad waana filim si guud diirada loogu daaray xeywaanka Diino saaro iyo dhibaatada lagu haayo.
Muxuu Ku Liitaa Filimkan: Inaba caadi ma ahan halkiisa saac hore xoogaa qaybaha dambe caajis yar ayaa ka muuqdo in la fahmi karo waxa xiga ee dhacaayo sheekada filimka.
Fariinta Filimka Jurassic World: Fallen Kingdom Oo Kooban: Filimkan wuxuu ka bilaabanaa sedex ka hor halka uu ku dhamaaday filimki Jurassic World madaama ay Diino saarka bur buriyeen halkii lagu xareen jiray.
Haddaba Fallen Kingdom wuxuu amba qaadaa in xeywaanaadka Diino saarka ee keenta ku jiraan inay halis kusoo fool leedahay oo ah buuraha ku hareersan inay Folkaano ka dhalan rabto oo ay qarxi rabaan sidoo kalena bini aadaankii goobta ka dhawaa iyagana wey isaga cararayaan.
Sidoo kalena dowlada ma fara galineyso in Diino saarka goobta ku baa ba’aan madaama keenta oo dhan dab qabsan rabo buuraha qarxi rabaan.
Laakiin Owen (Chris Pratt) iyo Claire (Bryce Dallas Howard) ayaa halis hor leh u bareerayaan waxaana soo kireesanaayo Sir Benjamin Lockwood (James Cromwell) kaasi oo mar ka mid ahaa shaqsiyaadkii la aas aasay (Richard Attenborough) goobta Diino saarka lagu xanaaneeyo Jurassic Park.
Sir Benjamin Lockwood (James Cromwell) markan wuxuu qorsheenayaa Diino Saarka haray ee keenta ku jiro in lasoo qabto lana geeyo jasiirada Shangri-La oo aysan mardambe carqalada bini aadanka kula kulmi doonin.
Laakiin qorshihii la damaacsanaa wuxuu noqonaa mid siweyn u qasmo qalad kale oo bini aadanka ka dhacaayo haddaba Owen (Chris Pratt) iyo Claire (Bryce Dallas Howard) sidee ku bad baadin doonaan Diino saarka keenta ku jiro ee halista labada dhinac heesato midda bin aadanka iyo mida dabka buuraha ka imaanayo iyo iyaga halista ay geesan doonaan.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Jurassic World: Fallen Kingdom: Benjamin Lockwood ayaa adeegsano oraah caan ah filimkan oo ah “Maqluuqa Alle uumay waxay u baahan yihiin in carqalad la’aan noolaadaan ee uma baahno in la ilaaliyo waxaana ka dhalan karo ilaalintaas carqalad joogto ah!”
Waa oraahda hageyso sheekada filimkan waxayna dulucdiisa tahay xeywaanka Diino saarka inusan u baahneyn ilaalo gaar ah in loo sameeyo, meel lagu sareeyo lana carqaladeeyo jiritaankiisa.
Filimkan wuxuu heer sare ku yahay qiirada uu leeyahay, Action-kiisa iyo qaabka fariinta loo dhigay oo si heer sare ah la isugu dheeli tiray waxaana amaan gaar mudan Director J A Bayona sida uu kaga shaqeeyay mashruucaan caanka ah una cadaalad falay.
Bandhiga Jilaayaasha: Chris Pratt wuu soo laabtay iyo doorkiisa Owen waa mid shactiro, qiiro iyo Action isku darsaday sidoo kalena waaya arag ku ah sida loola fal galo Diino saarka weliba door wacan ayuu filimkan ka qaatay.
Bryce Dallas Howard saameyn badan kuma lahan filimkan kaliya waxay ugu jirtaa inay marna dareenka Chris Pratt kiciso marna dajiso iyo sidoo kalen inaysan Diino Saarka jacleyn gabadhaan.
Daniella Pineda, Justice Smith iyo Toby Jones iyagana doorarkooda ma adkado madaama qoraal ahaan habka loo dhigay doorarkooda saameyn xoogan aysan laheyn.
Gunaanad: Kani waa mashruuca ugu wanaagsan taxanahan Jurassic Park tan iyo sanadii 1993 la daawaday haatana sanado badan waxaa la hadal heyn doonaa filimkan heerka sare loo diyaariyay Jurassic World: Fallen Kingdom.
Fadlan hoos kaga bogo goos gooska filimka Jurassic World: Fallen Kingdom adigaaba ka heli doontid: